Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Peru War Cusub » 32 ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen markii bas uu ka soo dhacay dhagaxa Peru
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Peru War Cusub • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Shilalka waddooyinka ayaa ku badan Peru sababo la xiriira darawalada baabuurta oo si xowli ah u socda, jidadka oo aan si wanaagsan loo dayactirin, calaamado la’aanta waddooyinka iyo fulinta nabadgelyada waddooyinka oo liidata.
Tobaneeyo qof ayaa ku dhintay shil bas oo ka dhacay Lima.
Xawaaraha sare wuxuu ka qayb qaatay musiibada baska.
Laba carruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay shilka.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Peru, bas rakaab ah oo ay saarnaayeen 63 rakaab ah ayaa ka soo dhacay buur u dhow magaalada caasimadda ah ee Lima.
Ugu yaraan soddon iyo laba qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen shilka. Laba carruur ah-wiil lix jir ah iyo gabadh saddex jir ah-ayaa ka mid ahaa rakaabkii dhintay.
Shilku wuxuu ahaa Peru shilkii saddexaad ee shil gaadiid oo dad badani ku dhinteen afar maalmood gudahood.
Shilku wuxuu ka dhacay cidhiidhi yar oo ka mid ah waddada Bartamaha Carretera oo 60 km (37 mayl) bari ka xigta caasimadda Lima. Jidku wuxuu isku xiraa Lima inta badan bartamaha Andes.
Saraakiishu waxay leeyihiin “taxaddar la’aan” ayaa ka qayb qaadatay shilka, maadaama basku uu ku socday “xawaare sare”.
Sida laga soo xigtay xisaabaadka badbaadaha, waxay ku dhacday dhagax waxayna ku dhacday god ilaa 650 fuudh (200 mitir) ah.
Axaddii la soo dhaafay, 22 qof ayaa dhimatay markii labo doonyood isku dhaceen wabiga Amazon ee Peru. Tiro aan la cayimin ayaa weli maqan.
Laba maalmood ka hor, bas kale ayaa ku dhacay tog ku yaalla koonfur -bari ee dalka, waxaana ku dhintay 17 qof.